Wasiirka Maaliyadda oo Isku-shaandheyntii ugu ballaadhnayd ku sameeyey Madax-qaybeedyada Laamaha Wasaaradda (Akhriso Magacyada) - Somaliland Post
Home News Wasiirka Maaliyadda oo Isku-shaandheyntii ugu ballaadhnayd ku sameeyey Madax-qaybeedyada Laamaha Wasaaradda (Akhriso...
Wasiirka Maaliyadda oo Isku-shaandheyntii ugu ballaadhnayd ku sameeyey Madax-qaybeedyada Laamaha Wasaaradda (Akhriso Magacyada)
Hargeysa (SLpost)- Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Md Cabdicasiis Maxamed Samaale, ayaa wareegtooyin uu maanta soo saaray isku-shaan-dheyntii ugu ballaadhnayd intii uu Wasiirka Maaliyadda ahaa ku sameeyey madax-qaybeedyada Shaqaalaha wasaaradda.
Wareegtada uu wasiirku soo saaray, waxa uu ku amray madax-qaybeedyada inay xilka si dhakhso ah ula kala wareegaan.
Wareegtada wasiir samaale soo saaray waxay u qornayd sidan:- “Waxa shaqaalaha magacyadoodu hoos ku xusan yihiin lala socodsiinayaa in maanta oo bishu tahay 10/07/2014 loo kala bedelay sidan hoos ku qoran:-
1. Keyse Axmed Cismaan oo ahaan jiray waaxda Baadhista waxa loo magacaabay Agaasaimaha Waaxda Miisaaniyadda.
2. C/raxmaan Jaamac Cilmi oo ahaan jiray Agaasimaha waaxda Miisaaniyadda waxa laga dhigay La-taliyaha Waaxda Arrimaha Miisaaniyadda.
3. Maxamed Nuur Maxamuud oo ahaan jiray Cashuuraha Berriga Hargeysa waxa loo magacaabay Isuduwaha Wasaaradda Maaliyadda Gobolka Sanaag.
4. Cilmi Cabdi Abokor oo joogi jiray xarunta Wasaaradda Maaliyadda waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Ceerigaabo.
5. Xuseen Jaamac Samatar oo joogi jiray xarunta Cashuuraha berriga waxa loo magacaabay Maamulaha Cashuuraha Berriga Ceerigaabo.
6. Farxaan Aadan Cawaale oo joogi jray xarunta Kasatamada waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Dararweyne.
7. Maxamuud Axmed Baadari oo ahaan jiray Maamulaha Kastamka Hargeysa waxa loo magacaabay Isuduwaha Wasaaradda Maaliyadda Gobolka Sanaag.
8. C/risaaq X Muxumed Aaye oo joogi jiray xarunta Kastamka waxa loo magacaabay maamulaha Kastamka Laascaanood.
9. Jaamac Maxamed Maxamuud oo joogi jiray xarunta kastamka waxa loo magacaabay Isuduwaha wasaaradda Maaliyadda Gobolka Togdheer.
10. C/raxamaan Maxamed Maxamuud oo joogi jiray cashuuraha Berriga Burco waxa loo magacaabay Maamulaha Cashuuraha Berriga Burco.
11. Sacdiya Siciid Barre oo joogi jiray Kastamka Caynaba waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Caynaba.
12. Cali Maxamed X Cali oo joogi jiray xarunta baadhista waxa loo magacaabay maamulaha Kastamka Beer.
13. Saleebaan Maxamed Maxamuud oo joogi jiray Kastamka madaarka Berbera waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Madaarka hargeysa.
14. Cumar Maxamuud Shirwac oo joogi jiray Kastamka Borama waxa loo magacaabay Maamule ku-xigeenka Kasatamka Madaarka Hargeysa.
15. C/xakiin C/laahi Maxamuud oo joogi jiray Kastamka Laanata Masalaha waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Dhexe ee Hargeysa.
16. Maxamed Axmed Wayrax oo joogi jiray qaybta Arkiifiyadda waxa loo magacaabay Madaxa Qaybta shaqaalaha.
17. Maxamed Xasan Saleebaan oo joogi jiray cashuuraha Berriga Gacan Libaax waxa loo magacaabay Xisaabiyaha Waaxda Maamulka.
18. Khadar C/raxmaan Faarax oo joogi jiray Cashuuraha Berriga Boorama waxa loo magacaabay waxa loo magacaabay maamulaha Cashuuraha Berriga Gacan Libaax.
19. Warsame Maxamed Maxamuud oo joogi jiray xarunta cashuuraha Berriga waxa loo magacaabay maamulaha Cashuuraha Berriga Borama.
20. Sahra Xaamud Jibriil oo joogi jirtay Kastamka Boorama waxa loo magacaabay Maamulaha Kastamka Boorama.
21. C/risaaq Jaamac Maxamed oo joogi jiray Csahuuraha Berriga Burco waxa loo magacaabay Maamule ku-xigeenka cashuuraha Berriga Maroodi-jeex.
22. Xuseen xasan Cabdi oo joogi jiray waaxda Maamulka waxa loo magacaabay madaxa qaybta Aarkiifiyada.
23. Khadar Aadan Cali oo joogi jiray laanta masalaha waxa loo magacaabay Kastamka Kalabaydh.
24. C/laahia Cumar Ibraahim oo joogi jiray xarunta wasaaradda Maaliyadda waxa loo magacaabay maamulaha Kastamka madaaraka Berbera.
25. Maxamed Xasan Aadan oo joogi jiray xarunta Kastamadda waxa loo magacaabay khasnajiga Kastamka Berbera.
26. Maxamed Cilmi Ismaaciil oo joogi jiray Kastamka Caasha cado waxa loo magacaabay maamulaha Kastamka Xariirad.
27. C/casiis Dheeg Axmed oo joogi jiray waaxda Miisaaniyadda waxa loo magacaabay Agaasime ku-xigeenka Waaxda Miisaaniyadda..
Sidaas awgeed, waxa shaqaalahan kor ku xusan la farayaa in ay sida ugu dhakhsaha badan iskaga xaadiriyaan goobaha shaqo ee loo bedelay, xilkana ula kala wareegaan, shaqaalaha la soo bedelayna waa inay soo galaan xarunta wasaaradda Maaliyadda.”